फयर्ड गरिएको: MyBlogLog र BlogGlog विजेट | Martech Zone
तपाईं को लागी लामो समय पाठकहरु को लागी, तपाईले याद गर्नु हुनेछ कि मैले MyBlogLog र BlogGlog साइडबार विगेट्स लाई हटायो। मैले उनीहरूलाई हटाउन धेरै समयको लागि संघर्ष गरें। मान्छेहरूका अनुहारहरू हेर्न मलाई रमाईलो लाग्थ्यो जुन मेरो ब्लगमा प्राय: आउँथ्यो - यसले पाठकहरूलाई तथ्या real्कहरूको सट्टा वास्तविक व्यक्तिको रूपमा देखायो Google विश्लेषण.
मैले प्रत्येक श्रोतको पूर्ण विश्लेषण गरे र उनीहरूले मेरो साइटमा ट्राफिक कसरी चलाए साथै मेरो दर्शकहरूले साइटमा कसरी कुराकानी गरे। सायद मैले दुबै विजेटहरूको बारेमा सबैभन्दा मन नपराएको कुरा हो:
MyBlogLog खाली छविहरू। यदि तपाइँ एक प्रकाशित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ विजेट त्यसोभए तस्बिरहरू देखाउँदछ मात्र फोटोहरू देखाउनुहोस्।
ब्लगग्लैगल छविहरू जुन वास्तवमै व्यक्तिहरूको साइटहरूको लागि विज्ञापन हो। यो नि: शुल्क विज्ञापन हो र यो त्यस्तो होइन जुन मैले साइन अप गरेको हुँ।
चार महिना अगाडि, म एक साइडबार सफा गर्दै गएँ - मेरो ब्लगबाट अलग गर्दै टेक्नोराटी, FuelMyBlog, र BlogRush। टेक्नोराटी वास्तवमै उनीहरूको ध्यान ब्लगमा केन्द्रित गर्न कडा मेहनत गरिरहेको देखिन्छ - म आशा गर्छु कि उनीहरूले पुन: वापसी गरे। BlogRush वास्तवमै केहि गरेको छैन किनकि यो hyped थियो।
इन्धनमेइब्लग र ब्लगग्याटलग अझै पनी नयाँको लागि राम्रो उपकरणहरू छन् ब्लगर्स नयाँ पाठक खोज्न। MyBlogLog याहू मा बादलमा बन्द गरीएको छ! र अप्रासंगिक भएको देखिन्छ।
एक दिन केहि हजार पाठकहरु संग (वेब ​​र द्वारा आरएसएस), MyBlogLog मेरो ब्लगमा केवल १ visitors जना आगन्तुकहरू ल्याएको छ:
ब्लगग्याटलग; जे होस्, मलाई समान समयको अवधिमा 58 XNUMX आगन्तुकहरू ल्याए।
केहीको लागि, त्यो राम्रो परिणाम जस्तो देखिन सक्छ। समस्या यो हो कि यो मेरो ब्लगमा प्राइम ईस्टेट हो। दायाँ साइडबार जहाँ मेरो नियमित पाठकहरु को टिप्पणीहरु, कोटिहरु, भिडियो, आदि संग कुराकानी एक एकल पाठक छैन मा विजेट को दुबै मा क्लिक गरीएको छ। घर पृष्ठ… होईन।
त्यसोभए मैले जवाफ दिन आवश्यक पर्ने प्रश्नहरू यी थिएः
मेरो आगन्तुकहरूले विजेटहरूबाट के फाइदा लिन सके? यकिन छैन कि त्यहाँ कुनै फाइदा छ किनकि कसैले उनीहरूसँग कुराकानी गरेन।
मैले विजेटहरूबाट के फाइदा पाइरहेको थिएँ? र के ती लाभहरूले लि readers्कहरूको लागि त्यो स्थान प्रयोग गरेर मेरा पाठकहरूलाई हुने फाइदाहरूभन्दा बढी भए गरे कुराकानी गर्ने?
मेरो निष्कर्ष यो थियो कि मैले प्राप्त गरेको लाभ भनेको साइडबार रियल ईस्टेटको एक ठूलो हिस्सा फ्याँक्न पर्याप्त थिएन। म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि यी सबै सेवाहरूले तपाईंको ट्राफिकबाट धेरै फाइदा लिन्छन् जुन तपाईं उनीहरूबाट लिनुहुनेछ।
परिणाम स्वरूप ... तिनीहरू फालिएका छन्!
टैग: boxeeबक्सफिशक्लिपसिन्कजाभास्क्रिप्टमा ईमेल मान्यकरणgetglueडिजिटल किटलिंक निर्माणmisoमोबाइल एड-टु-कार्ट दरहरूखोज ईन्जिन अनुकूलन इन्फोग्राफिकइन्फोग्राफिक खोज्नुहोस्खोजी स्पामसिबूकस्लाइडरsnappytvसामाजिक बुकमार्किंगसामाजिक मिडिया सल्लाहsocialtvxbox लाइभतिमी पनि
मार्क्स 27, 2008 मा 7: 39 PM
के तपाईं अझै ब्लगग्याटलग वा माईब्लग्लगबाट तपाईंको साइट भ्रमण भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई MyBlogLog मनपर्दछ यसको लागि यो तथ्या for्कको साथसाथै भेट्ने मानिसहरूलाई पनि, जबकि मैले तपाईलाई ब्लगमा घर जग्गाजमिन लिनको मतलब भनेको देखेको छु। मलाई लाग्छ कि म मेरो अर्को डिजाइनमा फुटरमा MyBlogLog सार्दैछु, तर म यसलाई जारी राख्नेछु।
साथै, यदि ती दुईजनाले प्रयोगकर्ताहरूलाई भित्र ल्याउने काम गरिरहेका छैनन् भने के हुन्छ? स्पष्ट रूपमा तपाई राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, डग, के यो सबै सदस्यता र खोजी ट्राफिक हो जसले तपाईलाई हिट ल्याइरहेको छ वा केहि अरु तपाईको लागि काम गरिरहेको छ?
मार्क्स 27, 2008 मा 7: 47 PM
मँ मेरो ब्लग मा प्रत्येक र हरेक आगन्तुक कमाई को एक विशाल विश्वास हुँ। म नयाँ ब्लग को लागी हर समय खोज्छु, उनीहरुको ब्लग मा टिप्पणी, र मेरो लागी मान्छेहरु लाई जवाफ (:))। म सम्पर्क भएमा धेरै ईमेलहरूको जवाफ दिन सक्दछु।
थपको रूपमा, मलाई लाग्छ कि स्थानीय वर्गहरू जुन म ब्लगिंगमा गर्छु र कार्यक्रमहरू जुन म बोल्दछु मद्दत गर्दछु। मसँग साथीहरू र सहकर्मीहरूको ठूलो नेटवर्क छ!
म व्यवसाय र सेवाहरु लाई बढावा दिन पनि चाहन्छु जुन 'मुख्यधारा' नहुन सक्छ र धेरै ध्यान प्राप्त गर्दछ। म विशेष गरी यो गर्छु जब तिनीहरू क्षेत्रीय कम्पनीहरू हुन्। मलाई मेरो आफ्नै पछाडिको घरानालाई मद्दत मन पर्छ!
पुनश्च: ब्लगलाई अप्टिमाइज राख्नु भनेको खोज इञ्जिन ट्राफिकको लागि पनि रातो कार्पेट हो ... तर राम्रो सामग्री र व्यक्तिगत स्पर्शले नयाँ पाठकहरूलाई समात्दछ।
मार्स 28, 2008 मा 9: 50 एएम
मैले सामेल हुने असंख्य सामाजिक नेटवर्किbar साइटहरूको लागि क्लार्क पिक्सको साइडबारको तल सानो ब्यानर राखें। अनुमानित रूपमा, म एकबाट ट्राफिक प्राप्त गर्छु जुन म वास्तवमा अक्सर आउँछु, प्रायः Fuelmyblog।
अहिले म ट्राफिकको लागि एन्ट्रेकार्ड र स्पटको साथ प्रयोग गर्दैछु। के तपाइँसँग ती साइटहरूमा कुनै विचारहरू छन्?
मार्स 28, 2008 मा 9: 01 एएम
हामीसँग बाँकीको साथ तपाईंको स्ट्याट विश्लेषण साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाइँ कहाँ समय पाउनुहुन्छ ?!
एक रूप सामाजिक बजार सेवा, हामी जहिले पनि बहस गर्दैछौं जुन प्रत्येक ग्राहकको लागि कुन विजेट प्रयोग गर्ने र म कहिले सुझाव दिँदिन।
मेरो लुक्ने शंका यो हो कि ती सबै केवल "बलिंग" थिए र वास्तविक यातायात चलाएनन्। मँ जहिले पनि विश्लेषकहरुलाई जाँच गर्न सोध्नु भनेको हो…
अब मलाई थाहा भयो…
पोस्टिंग राख्नुहोस्, म पढ्न जारी राख्छु !!
मार्क्स 28, 2008 मा 12: 21 PM
तपाईको साइटमा यातायात के चलिरहेको थियो र के थिएन भनेर हेर्नको लागि यो उत्तम हो।
मैले मेरो वेबसाइटहरूमा पनि त्यसो गर्नुपर्दछ !!!
मार्स 31, 2008 मा 9: 22 एएम
खुशी भयो कि ब्लगग्याटलगले तपाईंलाई केहि मूल्यवान ट्राफिक ल्याइरहेको छ। यो ठोकर वा Digg नम्बर नहुन सक्छ तर तपाईं पाउनुहुनेछ कि हाम्रा सदस्यहरू अन्य नेटवर्कहरू भन्दा धेरै 'टाँसि' छन्।
माफ गर्नुहोस्, तपाईंले ब्लगग्याटलग विजेट बन्द गर्नुभएकाले मलाई दु: खी छ, तर यस्तो लाग्छ तपाईंसँग त्यस्तो राम्रो कारणहरू छन्। के तपाईंले हाल हाम्रो कुनै पनि अन्य विजेटहरूमा हेराई गर्नुभएको छ? हामीसँग केहि केहि छ जुन तपाईंको ब्लगक्याटलग र / वा सामाजिक नेटवर्क गतिविधि को विभिन्न पक्षहरू प्रदर्शन गर्दछ। यो तपाइँको पाठकहरु लाई केहि अनियमित अनुहारहरु भन्दा बढी आकर्षक लाग्न सक्छ किनकि यो धेरै अधिक लक्षित सामग्री हो। उदाहरणको लागि हाम्रो न्यूज फिड विजेट लिनुहोस्, जुन तपाईंको सामाजिक गतिविधिलाई बढा बनाउँदछ: http://www.blogcatalog.com/account.widget.php?type=feed
हाम्रो सबै विजेटहरूले पनि बीसी सदस्यहरूले विजेटमा फोटो / विज्ञापन प्रदर्शन नगरीकन तपाईंको ब्लग पढ्दै गरेको कुरा ट्र्याक गर्दछ।
ठुलो काम जारी राख्नुहोस्,
daniel / blogcatolog.com
मई 30, 2008 मा 1: 01 PM
खराब ब्लग गुगलका लागि कुनै पीआर पास हुँदैन किनकि उनीहरूले नफोलो प्रयोग गर्दछन्।
मार्स 13, 2009 मा 3: 05 एएम
हाई डगलस, तपाईंलाई ट्विटरमा देखेर खुसी लाग्यो, त्यस्तै म यहाँ आएको हुँ। ट्विटर तपाईंको लागि कसरी कार्य गरिरहेको छ जान्न इच्छुक हुनुहोस्। मँ पनी सहमत छु कि तपाइँ अब ती साईडबारहरू Spruce गर्नुहुन्छ अब र त्यसपछि! टेक्नोराटीको बारेमा थप सुन्न चासो राख्नुहोस्। मँ धेरै व्यक्तिले टेक्नोराटी मार्फत मेरो वेबसाइटहरू छोड्दछु, तर मेरो साइटहरूमा धेरै थोरै त्यस्ता ठाउँमा आउँछन् ...
अप्रिल 6, 2009 मा 6: 37 एएम
मसँग मेरो ब्लगबग, ब्लगक्याटलग, ईन्धन मेरोब्लग किन छ भनेर एक मात्र कारण यो हो कि म को हेर्न को लागी हेर्न चाहन्छु। यसैले म तिनीहरूको ब्लगहरू पनि जाँच गर्न सक्दछु। सायद फिर्ता दिने संकेतको रूपमा र मलाई पनि थाहा पाउन को लागी उनीहरूलाई मेरो साइटमा रेफर गरिएको छ।